'सम्बन्धलाई कसिलो बनाउन मोदी तेस्रोपटक नेपाल भ्रमणमा आउदैछन' : डा. बराल - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
‘सम्बन्धलाई कसिलो बनाउन मोदी तेस्रोपटक नेपाल भ्रमणमा आउदैछन’ : डा. बराल
Posted by Milap Subedi | २६ बैशाख २०७५, बुधबार १२:३० |
नेपाल–भारतको उच्च स्तरको भ्रमण निरन्तर भईरहेको छ । चैत्रको पहिलो साता भारत भ्रमण गरेर फर्केका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निमन्त्रणामा फेरी भारतिय प्रधानमन्त्री जनरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणको लागि आउदै छन । उनलाई राजकिय सम्मान दिँदैछ । मोदीको यो भ्रमण यसअघिको भन्दा केही फरक छ । उनले नेपाल भ्रमणको प्रवेशद्धार जनकपुरलाई बनाउदै छन । यो भ्रमणको महत्व यसरी पनि छ की मोदीले नेपाल भारतको हितमा रहने केही महत्वपुर्ण आयोजनाहरुमा सम्झौता गर्नेछन । उनलाई जनकपुर र काठमाडौँमा नागरिक अभिनन्दन गरिने बताउदै गर्दा केही विरोधका स्वरहरु पनि सुनिदैछ । यसै सन्दर्भमा रहेर नेपाल भारत मामलाका विज्ञ प्रा. डा. लोकराज बरालसंग हेडलाईन नेपालका लागि राज ढुंगानाले गरेको संक्षिप्त कुराकानी ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुरबाट नेपालको भ्रमण सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ ?
पहिला कुरा त मोदी जी जहाँबाट आउनु हुँदैछ ,त्यसले केही फरक पर्दैन । नेपालको जुनै ठाँउबाट मोदी जी ले भ्रमण सुरु गरेता पनि त्यो नेपालकै भु–भाग हो । त्यसभन्दा पनि उहाँको बाटो त्यतैबाट पर्ने भएकोले र अघिल्लो भ्रमणको बेला जनकपुर भ्रमणको तिव्र ईच्छा भएको कारणले पनि उहाँले जनकपुरलाई नेपाल भ्रमणको प्रवेश द्धार बनाउन लाग्नु भएको मैले बुझेको छु ।
मोदी जीको एउटै कार्यकालमा तेस्रो पटकको नेपाल भ्रमणले के सन्देश दिन्छ ?
यो त्यस्तो कुनै नौलो र विशेष भ्रमण होईन नेपाल र भारत भनेको दुई पुराना छिमेकी मुलुक हुन । यहाँ सबै कुराको आदानप्रदान भईरहन्छ । यो भ्रमण पनि त्यसैको एउटा स्वरुप हो । केही समयअघि नेपालका प्रधानमन्त्री ओली जी भारत भ्रमणमा जानु भयो । अहिले मोदी जी आउदै हुनुहुन्छ । यसमा कुनै नौलो कुरा छैन । यो भ्रमणले नेपाल –भारत मिलेर बसेका दुई असल छिमेकी देश हुन भन्ने सन्देश जान्छ ।
यो भ्रमणले त्यस्तो विशिष्ट सम्बन्ध निर्माण गर्छ ?
तपाईले कस्तोलाई विशिष्ट सम्बन्ध निर्माण भन्ने बुझ्नुहुन्छ ? त्यो आफ्नो ठाँउमा होला । तर खासमा यस विशिष्ट सम्बन्ध भन्दा पनि उच्चस्तरको भ्रमणको आदानप्रदान हो भन्ने बुझ्न पर्छ । नेपाल र भारतको सम्बन्ध जहिल्यै विशिष्ट किसिमको छ । अहिले त्यसमा मलजल गर्न, बलियो र कसिलो बनाउन दुवै मुलुकका प्रमुखहरु लागेका छन ।
४. प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणको पुर्व सन्ध्यामा विरोधका स्वरहरु सुनिनुलाई कुन ढंङ्गले लिने ?
यसले खासै असर पार्दैन । राजनिति गर्ने नेताहरुलाई विरोधले खासै असर पर्दैन । त्यहाँ माथी मोदी जी नेपाल –भारत कुटनितिको बाटोबाट यहाँ आउदै हुनुहुन्छ । त्यसैले विरोधका स्वर सुनिनुमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन यो सामान्य विषय हो ।
Previousजलेश्वर–जनकपुर बाटो अवरुद्ध
Nextपोर्चुगलमा एक नेपालीको निधन
नेकपामा नेताको सम्पत्ति खोजी
संसदको गाडी ‘दुरुपयोग’ गर्दै सांसद, मर्मतको नाममा मनलाग्दी खर्च !
२९ पुष २०७३, शुक्रबार १०:१९
पूर्व राष्ट्रपति यादव ‘जन-आन्दोलन स्वर्ण पदक-२०७४’ बाट विभूषित
२४ कार्तिक २०७४, शुक्रबार १३:४६
रसुवागढीबाट ओलीको बोली : ‘यही क्षेत्रबाट रेलमार्ग निर्माणको काम सुरु गर्छौं’
४ पुष २०७४, मंगलवार १५:३०